Deezer Music Player အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဂီတ နှင့် အသံ
6.2.36.65 for Android
4.5 | 100,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（17.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts
မင်းရဲ့ဘ0ဟာသူ့ရဲ့တေးသံများနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။
56 သန်းအပုဒ်များ, Playlists နှင့် podcasts များပါ0င်သည်။ Android အတွက်ဒီတေးဂီတဖွင့်စက်ကသင်ချစ်မြတ်နိုးသည့်သီချင်းများကိုအမြဲတမ်းပေးပြီးသင်၏အကြိုက်ဆုံးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဆောင်ကြဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တေးဂီတကိုယူဆောင်လာကြသည်။
BR> •သီချင်း 56 သန်းရှိသောအစဉ်အဆက်တိုးချဲ့ထားသော catalog တစ်ခုကိုရှာဖွေပါ။ • Shuffle Mode ဖြင့်ပြန်လည်ပတ်မှုအသစ်များကိုရှာဖွေပါ။ •သီချင်းများပါ0င်သောအကြံပြုချက်များကိုရှာဖွေပါ။ •သီချင်းများထည့်ပါ သင်အကြိုက်ဆုံးလမ်းကြောင်းစုဆောင်းခြင်းကိုထိပုတ်ပါ။ •သင်လိုချင်သောဖွင့်စရာစာရင်းကိုနားထောင်ပါ။ •သင်လိုချင်သောဖွင့်စရာစာရင်းကိုနားထောင်ပါ။ •သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွင့်စရာစာရင်းများနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သူများနှင့်အကြိုက်ဆုံးပုဒ်များကိုအခြားသူများနှင့်မျှဝေပါ။ •ရေဒီယိုအသံလွှင့်စက်များ, နှင့်အင်္ဂလိပ်စာ podcasts
Deezer Premium Music Player နှင့်အကန့်အသတ်မရှိ - ကြော်ငြာများနှင့်မည်သည့်ကြော်ငြာလွှာမလိုအပ်ပါ။ •ကြော်ငြာများမရှိပါ။ • Offline Mode: သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလမ်းကြောင်းများသို့မဟုတ် podcasts များကို download လုပ်. မည်သည့်နေရာတွင်မဆို offline music ကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်. နားထောင်ပါ BR> •အကန့်အသတ်မရှိ skips • Song Shuffling Skips • Song Shuffling
• Songs Shuffling (320 Kbps)
• Music and Podcast Player သည် Amazon Alexa, Google Home နှင့်အခြားချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
BR> B> Deezer Flow
) သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂီတဖွင့်စက်ကိုပြောပြပါ။ သင်၏အရသာအပေါ်တွင် အခြေခံ. သင့်အတွက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတရောနှောမှုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ လမ်း။ Play ကိုနှိပ်ပြီးသင်နှစ်သက်သောသီချင်းများနှင့်အတူ Non-stop music stream ကိုပျော်မွေ့ပါ။
သင်၏ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများ - Google Home, Amazon Alexa နှင့် Sonos အသံစနစ်များရှိသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော pop သီချင်းများနှင့်ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုနားထောင်ပါ။
) အကောင့်တစ်ခုပေါ်တွင်ဒဲဇိုင်းပရီမီယံပရိုဖိုင်း6ခုအထိသင်မိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဝေမျှနိုင်သည်။
Offline ဂီတကိုနားထောင်ခြင်းကဲ့သို့သော Deezer Premium ၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများ။
Dehezer Music Player သည်အပူဆုံးသီချင်းများနှင့် podcasts များကိုအကန့်အသတ်မရှိလက်လှမ်းမီမှုကိုပေးသည်။ အခိုက်အတန့်တိုင်းကိုတေးသံပေးသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးသော playlistists ရှာပါ။ WiFi မလိုအပ်ပါ - သီချင်းများကို download လုပ်ပြီးအော့ဖ်လိုင်းဂီတကိုသင်အိမ်တွင်ဖြစ်စေ, သင်ချစ်သောအရာကိုပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ
ဘာအသစ်လဲ Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts 6.2.36.65
We've put our app in order. Fewer bugs so your app works likeacharm.
Deezer Music Player Premium Version Free Download | Deezer Music App
Smart nesss tricks
How to Download Music from Deezer App in2Minutes?
Web Tech Tutorial
Soft Piano Music for Spa, Massage, Yoga & Meditation with Water Sounds
Huawei Watch GT2How To Transfer Songs & Music Player Review!
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts 6.2.35.62
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts 6.2.34.46
Deezer Music Player: Songs, Playlists & Podcasts 6.2.33.56
Zaycev.net: скачать и слушать музыку бесплатно
Shiva Mantra- Om Namah Shivaya
Today's Hit Ringtones - New Popular Songs for 2021
Good music app thank you
Turbo VPN-ဆိုဒ်များအားလုံးကိုရယူရန်အခမဲ့ VPN proxy
Bunny VPN - Unblock Sites & Apps Secure VPN Master
Lion VPN: Free VPN Proxy, Unblock Site VPN Browser
သင်၏အက်ပ်များကိုအဆင့်မြှင့်ရန် 9Apps ကိုအသုံးပြု!